QGuapa Milano | Umhambisi eSpain | I-stockmarca
Umkhiqizo wase-Italy oyohlala ufuna esitolo sakho
I-QGuapa uluhlobo lwekhwalithi ephezulu njengokufakazelwa kwalo, njengoba yenzelwe futhi yakhiwa e-Italy. Kwethulwa imigqa enamandla futhi eyinkimbinkimbi ngezitayela zakamuva.
Iqoqo elisha le-Autumn-Winter 2021
Ukuqoqwa okusha kwe-QGuapa Milano entsha yasekwindla-ebusika ngo-2021 kuthuthukisa isitayela semodeli somkhiqizo wanemikhuba yakamuva ezosetha ijubane lemfashini ezinyangeni ezizayo.
Ngokuqondene nemibala, kulokhu umkhiqizo ukhethe izitayela zakamuva: i-beige, i-pink, i-orange, emhlophe noma emnyama. Futhi ukuthola izingubo zayo esezivele ziyimicikilisho emicimbini nasemicimbini enezindwangu ezilandelanayo kanye nokugqama komhlophe nomnyama.
Bhekabook QGuapa FW21
Iqoqo ngemuva kokuqoqwa, i-QGuapa Milano ihlala ithembekile kwifilosofi yayo yokuzethula kowesifazane wesimanje futhi osemusha. Umbuzo onzima ukuwufinyelela futhi lokho kukhombisa ukuthi inkampani yase-Italy ayigcini nje ngokukhula ngokugcwele nangokunwetshwa, kepha futhi ihamba phambili ezintweni ezithandwa ngabesifazane.
Bhekabook QGuapa SS21
Bhekabook QGuapa FW20
Bhekabook QGuapa SS20
Xhumana manje uku-oda iqoqo lokuwa-ubusika 2021 noma ubheke imikhiqizo yethu engaphakathi kwesitoko se-SS21 ngokuthumela ngokushesha.
Lungiselela i-oda lakho i-FW21
Bona imikhiqizo esitokweni sonyaka wasebusika SS21